ဆေးရုံကို အချိန်မီ မပို့လိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်မှာပဲ နှလုံးရပ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး – Askstyle
ဆေးရုံကို အချိန်မီ မပို့လိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်မှာပဲ နှလုံးရပ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး
ေဆးရံုကုိ အခ်ိန္မီ မပုိ႔လုိက္ႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္မွာပဲ ႏွလံုးရပ္ၿပီးေသဆံုးသြားတဲ့ ညီထြဋ္ေခါင္ရဲ႔ ခ်စ္သူေကာင္မေလး…
သ႐ုပ္ေဆာင္ ညီထြဋ္ေခါင္၏ ခ်စ္သူ ယေန႔မနက္က ေနအိမ္မွာပင္ ႏွလုံးရပ္၍ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ” ေမာင္ေလး ခ်စ္ရတဲ့မေမ…
ဒီပုံေလးဟာ ေနာက္ဆုံး႐ိုက္ယူခဲ့မိတဲ့ ပုံေလးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔မထင္ခဲ့မိဘူးဗ်ာ…အပူေတမ်ားတဲ့ေလာကႀကီးကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္စက္အနားယူပါေတာ့ေနာ္R. I. P”လို႔ သူရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာလည္းေရးသားထားပါတယ္။ ညီထြဠ္ေခါင္ရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလးႏွလုံးရပ္၍ ေနအိမ္တြင္ကြယ္လြန္ ညီထြဠ္ေခါင္ရဲ႕ ခ်စ္သူေကာင္မေလးက
ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏွလုံးရပ္ၿပီး ေနအိမ္၌ ကြယ္ လြန္သြားတယ္လို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္က 8 days သို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊ “မေမက Covid ေၾကာင့္ဆုံးတာလားဆိုတာေတာ့ အတပ္မေျပာႏိုင္ဘူး၊ေဆး႐ုံမွာ ေဆးေသခ်ာမစစ္ရေသးေတာ့ေလ၊ ႏွလုံးရပ္ၿပီး ဆုံးသြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္၊
အိမ္မွာဘဲ ဆုံးသြားတာပါ၊ ေဆး႐ုံသြားၿပီးအခ်ိန္မီ မကုလိုက္ရဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီ ” လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ” ေမာင္ေလး ခ်စ္ရတဲ့မေမ…ဒီပုံေလးဟာေနာက္ဆုံး႐ိုက္ယူခဲ့မိတဲ့ ပုံေလးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔မထင္ခဲ့မိဘူးဗ်ာ…
အပူေတမ်ားတဲ့ေလာကႀကီးကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္စက္အနားယူပါေတာ့ေနာ္ R. I. P လို႔ သူရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာလည္းေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။
ဆေးရုံကို အချိန်မီ မပို့လိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်မှာပဲ နှလုံးရပ်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး…
သရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင်၏ ချစ်သူ ယနေ့မနက်က နေအိမ်မှာပင် နှလုံးရပ်၍ သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ် သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်က ” မောင်လေး ချစ်ရတဲ့မမေ…
ဒီပုံလေးဟာ နောက်ဆုံးရိုက်ယူခဲ့မိတဲ့ ပုံလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးဗျာ…အပူတေများတဲ့လောကကြီးကနေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါတော့နော်R. I. P”လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းရေးသားထားပါတယ်။ ညီထွဠ်ခေါင်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနှလုံးရပ်၍ နေအိမ်တွင်ကွယ်လွန် ညီထွဠ်ခေါင်ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးက
ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့တွင် နှလုံးရပ်ပြီး နေအိမ်၌ ကွယ် လွန်သွားတယ်လို့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်က 8 days သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ “မမေက Covid ကြောင့်ဆုံးတာလားဆိုတာတော့ အတပ်မပြောနိုင်ဘူး၊ဆေးရုံမှာ ဆေးသေချာမစစ်ရသေးတော့လေ၊ နှလုံးရပ်ပြီး ဆုံးသွားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်၊
အိမ်မှာဘဲ ဆုံးသွားတာပါ၊ ဆေးရုံသွားပြီးအချိန်မီ မကုလိုက်ရဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ တော်တော် နေမကောင်းဖြစ်နေပြီ ” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်၊ သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်က ” မောင်လေး ချစ်ရတဲ့မမေ…ဒီပုံလေးဟာနောက်ဆုံးရိုက်ယူခဲ့မိတဲ့ ပုံလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးဗျာ…
အပူတေများတဲ့လောကကြီးကနေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါတော့နော် R. I. P လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။